Waa maxay VLAN
Liiska ISP Qaadashada IPV6 Imtixaanka Xawaaraha IP-gaaga Tirooyinka Roomaanka IPv4 iyo IPv6 PHP Subnet Calculator GeoLocation
Waa maxay VPNWaa maxay VLAN8 Waddooyin si looga hortago weerarrada injineeriyaddaIsticmaalka A VPN si aad u hubiso Shabakada Wireless NetworkXaqiijinta A Linksys WRT54G Wireless Gp-Broadband Router
LanguageEnglishCarabiChinese (La fududeeyay)FaransiiskaJarmalHindiTalyaaniJapanPortugalRuushSpainCibraanigaArmenia
Waa maxay VPN
8 Waddooyin si looga hortago weerarrada injineeriyadda
Isticmaalka A VPN si aad u hubiso Shabakada Wireless Network
Xaqiijinta A Linksys WRT54G Wireless Gp-Broadband Router
Hababka Nabadgalyada (BGP) Xuduudka Xuduudaha Gaariga
Macluumaadkaaga Gaarka ah Badbaado
Wax kasta oo aad rabto inaad ogaato IP-ga Subnetting In 8 Tallaabooyin fudud oo fudud
Maxay Ip My Ip
Sidee baan u helayaa Cinwaanka My Ip On Windows 10
Sida Loo Helo Cinwaankaaga Ip
Waa maxay cinwaanka Ip
Ku soo dhowow My Blog Ip
Waa maxay VLAN?
VLAN waa erey macnaheedu yahay Shabakadda Aagga Wareegga ah. By "Virtual" ma ahan qaybta shabakadda ee shabakada laakiin waa qeyb shabakadeed oo macquul ah.
Qeybta shabakada ee shabakada waxay noqon kartaa laba isbaaro oo isku xiran oo leh shabakado kala duwan oo ka shaqeeya mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Nidaamka shabakada macquulka ah ama "VLAN" wuxuu noqon karaa hal isku xidh oo kaliya oo loo qaabeeyey shabakado badan.
Maxay tahay dhibicda isticmaalka VLANs?
Goobaha shabakadaha ee todaysyada ah ee badan oo ah LAN-yada (Networks Area) ayaa aad u weyn. Dhaqannada shabakada wacan waxaad dooni laheyd inaad jebiso dukumiintiyada yar yar ama qaybo badan oo LAN ah. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad kala soocdo shabakad si aad u kala caydhinayso taraafikada u dhaxaysa labada ujeeddo amniga haddii aad leedahay qaybo kala duwan sida xisaabinta iyo iibinta tusaale ahaan. Waxa laga yaabaa in laga yaabo in iibku uu u baahdo inuu galo nidaamyo gaar ah oo ka mid ah shabakadaha waaxyaha xisaabaadka laakiin dhammaantood ma ahan.
U ogolow in aad leedahay dhismo waaweyn oo leh laba qaybood, Xisaabin iyo iib. Xisaabtu waxay leedahay dadka 125 iyo Sales waxay isticmaalaan isticmaalayaasha 200. Waxaad qaybtaada siin kartaa qayb ka mid ah Class C IP subnetka oo u oggolaanaya cinwaanada martida loo adeegsan karo 254. Tani waxay noqon doontaa wax ka badan oo ku filan oo lagu taageerayo macaamiisha koox kasta. Waxaad haysataa hal isku xiran oo isku xiran oo leh cufnaanta ku filan si loo taageero dhammaan dadka isticmaala 325 kadibna qaar ka mid ah iskuxirku waa VLAN iyo Inter-Vlan. Waxaad samayn kartaa VLAN 1 iibka iyo VLAN 2 ee Xisaabinta. Kadibna waxaad si fudud u ogaataa dekadaha isticmaala dadka isticmaala inay ku xiran yihiin oo ay dhigaan VLAN dekedda qaybta qaraabada.
Hadda, waxaad leedahay qaybahaaga qaybsan laakiin ma jirto habka ay u joogaan inay hadda la xiriiraan sababtoo ah xitaa haddii ay ku xiran yihiin qalab jireed oo isku mid ah, waxaa lagu kala soocayaa qaybo macquul ah ama VLANs. Tani waa halka ay Isku-xirka Inter-VLAN soo galayaan. Waxaad ubaahan doontaa inaad habeynta routerka gudaha ee wareegga sida inuu u gudbin karo xogta labada qaybood oo macquul ah ama VLANs. Xaaladaha intooda badan router-ka guduhu wuxuu kaloo yeelanayaa nooc ka mid ah howlaha amniga sida ACISs (Cisco Control Access List). Waxaad guud ahaan tilmaami kartaa cinwaanka iyo cinwaanka goobta, shabakadaha iyo dekadaha farsamada ee loogu talagalay gaadiidka soo galaya ama ka baxsan.
Mararka qaar waxaad yeelan doontaa dhismayaal badan oo ku yaala Man (Metropolitan Area Network) ama goobo dhowr ah oo ku yaalla LAN (Shabakadda Shabakadda). Xaaladdan waxaad ubaahantahay inaad abuurto interplaces interplaces inta u dhaxaysa isku-xireyaasha kala duwan ee Ethernet iyo "Gundhig" faahfaahinta VLAN kuwan oo ku xiran habka VTP (Qaabka Isku-xirka Waalidiinta).
Guud ahaan degaanka VTP waxaad yeelan doontaa galka koowaad ama Root Iskaa socodka VTP ee qaabka adeegga. (XUSUUS: Waxaa jira heerar kala duwan oo VTP ah) oo ku xidhan "Root" waxaad heli doontaa gawaarida ku dhex jira macaamiisha ama qaabka hufan ee VTP. Fikradaha u dhexeeya "Root" iyo "Macaamiisha" ayaa lagu qeexi doonaa "Dhar" si loo qaado macluumaadka VTP iyo gaadiidka VLANs badan. Marka xiriirada la aasaaso VTP Server wuxuu cusbooneysiin doonaa Macaamiisha oo leh dhammaan macluumaadka VLAN oo uu og yahay. Waqtigan xaadirka ah waxaad u kala rogi kartaa dekadaha adoo isticmaalaya furaha macmiilaha leh VLANs-ka iyo xogta VLANs-ka ee kuwan ayaa ku soo geli doona gogolka ay ku leeyihiin LAN-da dhexdooda.
Dabcan tani waa sharaxaad aad u fudud, ma aanan qaadin shaqaale dheeraad ah iyo STP (Spanning Tree Protocol) tixgelinta halkan si fudud.
My-ip-is.com waa adeeg ay bixiso cinwaankaaga IP iyo macluumaad dheeraad ah.
Wax badan ka baro cinwaanada IP My Ip Is on WikiPedia. More Qalabyada DNS waxaa laga heli karaa MXcorrect.com
IP-ga waxaa lagu heli karaa luqadaha oo idil! Eeg MyIp Homepage Luqadaha